Local Celebrity – Page3– WunYan
သာသနာ့ဘောင်မှာ ပျော်သလောက် နေသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ရဲအောင်
သာသနာ့ဘောင်မှာ ပျော်သလောက် နေသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ရဲအောင် သရုပ်ဆောင်ကျော်ရဲအောင်တစ်ယောက်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့လေးမှာ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့အတူ သာသနာ့ဘောင်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးကတော့ အသက် (၄၀) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ (၅) ရက်ကြာဝင်ရောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရဲအောင်ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဓမ္မဒူတဇေတဝန်တောရကျောင်းတိုက်မှာ သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပျော်သလောက် နေသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကျော်ရဲအောင်ကို သားဖြစ်သူ သားထူးမြတ်ကျော်ရဲအောင်နဲ့ သမီးမှုံနံသာကျော်ရဲအောင်တို့က…
ကျောက်ကပ် အစားထိုး ကုသခွင့် ရတော့မယ့် သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်
ကျောက်ကပ် ဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်ဟာ အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ဆေးရုံနှစ်ကြိမ်တင်ခဲ့ရပြီး ယခုထပ်မံ တင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမရဲ့ ကျောက်ကပ်ဟာ လုံးဝပျက်ဆီးနေခဲ့ပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘဲ ရာသက်ပန်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှသာ အရှင်းပြန်လည်ပျောက်ကင်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အစားထိုးကုသမှုတွေ၊ ရာသက်ပန် ကျောက်ကပ်ဆေးကြောဖို့တွေက သူမအတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့် တက်နိုင်တဲ့ဘက် ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။…
ဘဏ်မှာ ငွေထုတ် ငွေအပ်တဲ့အခါ သေချာ စစ်ကြဖို့ ဒီနေ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ သတိ ပေးလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
Posted on October 17, 2018 by whuk-46651
မယ်လိုဒီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အမေလို့မထင်ရက်လောက်အောင် အရမ်းလှတဲ့မိန်းမပျိုတစ်ဦးလို့ ပရိသတ်တွေက ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ လတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတဲ့မယ်လိုဒီကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အမြဲအဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ မယ်လိုဒီက ဘဏ်မှာငွေအပ်ရင်း ငွေမပြည့်တာကြောင့် ဂွမ်းခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှပေးထားတာပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း မယ်လိုဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံတွေ့ရစေဖို့ သူမရဲ့အတွေ့အကြုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မယ်လိုဒီရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ရယ်ရခက် ငိုရခက်ပါပဲနော်… မယ်လိုဒီကတော့ ” တစ်သောင်းတန်အုပ်မှာ တစ်အုပ်ကို…
မင်းသွေး သေဆုံး ချိန်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ကြုံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ စည်ဖြိုး
Posted on October 4, 2018 by whuk-46651
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့ညမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်းက တစ်နိုင်ငံလုံးကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးက ညီအစ်ကိုလို ခင်တဲ့ မင်းသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေ့ကြုံခံစားရသမျှကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးတစ်ယောက် ဆုံးပါးသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားကြားချင်း နေအိမ်ကို သတင်းသွားမေး၊ ရင်ခွဲကိုလာကြည့်တဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေ များပြားလှပါတယ်။ မင်းသွေးရဲ့ရုပ်အလောင်း ထားရှိရာ သင်္ကန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲရုံကို အောက်တိုဘာလ ၄…
နားထောင်ရင်း မျက်ရည်ကျရမယ့် နေတိုးရဲ့ လရောင်ချော့တး
နားထောင်ရင်း မျက်ရည်ကျရမယ့် နေတိုးရဲ့ လရောင်ချော့တး အကို တစ်ယောက် အနေနဲ့ ညီလေးကို အိပ်ပါတော့ ညီငယ်လေးရေ.. လို့ ချောသိပ်ဖူး ကြမှာပါ… ဒါပေမယ့် ညီဖြစ်သူမင်းသွေး ထာဝရ အိပ်စက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့… နေတိုးရဲ့ဂရုနာသံနဲ့ သီချင်းလေးက အခုနားထောင်မိတိုင်း မျက်ရည်ကျမိစေမှာပါ…. ကိုမင်းသွေး ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ…. ဒီ vedio လေးက…
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို မိသားစု ကိုယ်စား ဦးလေး ဖြစ်သူ ပြောကြား
သရုပ်ဆောင်မင်းသွေးတစ်ယောက်ဟာ မနေ့ညပိုင်း ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ အမောဖောက်ပြီးရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးပါးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အနုပညာရှင်တော်တေ်ာများများ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းသွေးဟာ ပါရမီဆေးရုံမှာဆုံးပါးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မင်းသွေးဟာ စင်ကာပူကနေပြန်ရောက်ပြီး အိမ်မှာတရားထိုင်၊ ရေသောက်ပြီးမှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဘောလုံးကန်ဖို့ ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ မင်းသွေးရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို အရမ်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး အားကစားလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင် ကျန်တဲ့ရောဂါအခံတွေလည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ခုလိုမျိုး ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားတာကတော့…
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး၏ နာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
မေတ္တာရပ်ခံခြင်း ဘဝ တစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်း သွားသော သရုပ်ဆောင်၊ တေးသံရှင် မင်းသွေး၏ နာရေးသို့ ကြွရောက် အားပေး နှစ်သိမ့် သတင်း မေးလိုကြသော စာနယ်ဇင်းနှင့် ရုပ်သံ မီဒီယာ မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် နေအိမ်သို့ လာရောက်သော အခါတွင် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း ကတ်ပြား၊ (သို့မဟုတ်) မီဒီယာ အမည်ပါသော လည်ဆွဲများဖြင့် ကြွရောက် ပေးကြပါရန် နှင့်…
မင်းသွေးအတွက် ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရဲ့ ဝမ်းနည်း မှတ်တမ်း
မ​နေ့ညက​ပေါ့။ ကျွန်​​တော်​စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ကို အသည်းအသန်​ဖတ်​​နေမိတယ်​။ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း၏ “နန်းကျ ဘုရင်​”။ကုန်း​ဘောင်​ရဲ့​နောက်​ဆုံးမင်​ဆက်​ သီ​ပေါ၊ဆင်​ဖြူ မရှင်​ စုဘုရားလတ်​ ကင်းဝန်​ က​နောင်​ညောင်​ရမ်း မက္ခရာ သုံးဆယ်​ ဗြိတိသျှဆူဒါးရှား ​မောင်​သန်း​ဆွေထားဝယ်​ ဦးဝင်းငြိမ်းတို့ရဲ့ အကူးအယှက်​ဟာ ကျွန်​​တော့ကို မနေ့ညကအ​တော်​​လေးပင်​ဆွဲ​ဆောင်​ခဲ့​လေသည်​။ ည ၁၁ နာရီ ၄၃ ​လောက်​တွင်​ ဖတ်​လက်​စ စာအုပ်​ကို ပိတ်​လိုက်​ပြီး အိပ်​ရန်​ပြင်​လိုက်​သည်​။အိပ်​ဖို့ပြင်​လိုက်​​ပေမယ့်​ အသားကျ​နေ​သော လက်​က ​ဘေးတွင်​ရှိ​နေ​သော ဖုန်းကိုယူလိုက်​ပြီး facebook…
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး (သရုပ်ဆောင် နေတိုးရဲ့ ညီဖြစ်သူ) ဘောလုံးကန်ရင်း အမောဖောက်ရာမှ သေဆုံး
သရုပ်ဆောင် “မင်းသွေး”ကွယ်လွန်သည့် သတင်းအတည်ပြု သရုပ်ဆောင်မင်းသွေး ဟာ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့က ဘောလုံးကန်ရင်း အမောဖောက်ရာမှ လဲကျခဲ့ပြီး ပါရမီ ဆေးရုံ သို့ အရေးပေါ် ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အသက်မမီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကိုတော့ သင်္ကန်းကျွန်း စံပြ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မင်းသွေး ဟာ သတ်ကွင်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့…
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Posted on October 3, 2018 by whuk-46651
သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေဟာ တချိန်က ဗီဒီယိုလောကမှာ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကိုစွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ ချို့တဲ့အားငယ်သူတွေရဲ့ ခိုကိုးရာအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေဆိုတာနဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးလို့ နာမည်တွင်ရအောင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နေသူပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက်ဟာ ယခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ”သင်ပုန်းချေနိုင်တာကြာပြီ ဒီနေ့ပြီး နောက်နေ့ကျရင် အစ်မက သင်ပုန်းချေပစ်လိုက်တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အရာတွေကို ဘယ်တော့မှ ခေါင်းထဲ အကြာကြီးမထည့်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အစ်မမှာ ရပ်တည်ဖို့…